Ambanja : Tifitra naharatrana olona 6, ka ny 2 tena voa mafy
Sary Sobika Ambanja
Nirefodrefotra vao maraina ny basy teto Ambanja androany. Ren’ny olona fa voasambotry ny Zandary tany Nosy Faly ny lehilahy iray ahiana ho tompon’antoka tamin’ny famonoana ka nahafaty lehilahy iray nandeha haka katy tany Antsalaka, telo herinandro lasa izay.
Voalaza fa olona tokony mbola mamita sazy any am-ponja io voasambotra io. Efa nampidirina am-ponja hatry ny omaly rahateo izy. Nirohotra nihazo ny fonjan’Ambanja ny andian’olona maro androany maraina, tonga hatramin’ireo mpivarotra katy avy any Ambilobe. Toerana saropady anefa ny fonja, ka niatrana niaro izany tsy ho vaky ny mpitandro ny filaminana mitambatra.
Nanapoaka basy ireto farany nanaparitahana ny olona, izay efa entin-katezerana. Vokany dia enina no naratra, nisy voan’ny bala ka maratra mafy mandalo fandidiana amin’izao ny roa amin’ireo.
Vehivavy ny iray amin’ireo naratra, ary zaza latsaky ny 18 taona ny telo izay tovolahy mpianatry ny CEG Ambanja ny iray. Voatery noravana avokoa ny mpianatra, indrindra amin’ireo sekoly manamorona ny lalam-pirenena faha-6 hisorohana ny fitangorongoronana.
Mbola mifanenjika erany tanàna ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka, mbola tsy milamina ny tanàna.